मिति, कम्प्युटर गेम जो कुनै पनि उमेर र लिङ्ग, कुनै पनि पेशा र रोजगारीको बिल्कुल सबै मानिसहरू वहन लोकप्रिय समय व्यतीत, एक हो। तर अब र अधिक सक्रिय रहेको पाइरेसी विरुद्ध लड्न, त्यसैले यदि तपाईंलाई कम्प्युटर गेम किन्न चाहँदैनन्, तर अब यो महत्त्वपूर्ण बन्ने छ।
स्वाभाविक, धेरै मान्छे सुरुमा विकासकर्तालाई आदर भुक्तानी गर्न, र निरपेक्ष सम्भावना साथ सुरू कि खेल को पूर्ण सुविधाहरू रमाइलो गर्न, र आवश्यक छ भने, तपाईं सबै आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुनेछ खेल खरिद गर्न चयन गर्नुहोस्। तथापि, सबैलाई अझै पनि यति खर्च गर्न आफ्नै कमाउन छैन, खेल को लागि कमाएको पैसा तिर्न तयार र खेलाडीहरू धेरै छ। ": GO सीएस" र यो आफ्नो सीप सुधार तपाईं खेल खरीद विचार गर्नुपर्छ किन हो। अब तपाईं कसरी पैसा बनाउन सिक्न हुनेछ किनभने "सीएस: जाओ"।
हो, तपाईं सही, कम्प्युटर खेल मा, तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ सुने, र यो तपाईं दुनिया मा सबै भन्दा राम्रो हुन छ यो जीत किनभने, प्रमुख टूर्नामेंट मा नगद पुरस्कार बारेमा आवश्यक छ। यो तपाईं आफ्नो मनपर्ने खेल खेल्न गरेर प्राप्त गर्न सक्छन् जो एक साधारण सानो आय छ। खैर, तपाईं यो थाह छैन भने, त्यसपछि तपाईं निश्चित कसरी ": GO सीएस" मा पैसा बनाउन बारेमा थप विवरण सिक्नुपर्छ।
खेल मा ड्रप
तपाईं कसरी "सीएस: जाओ" मा पैसा बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तुरुन्तै जहाँ यो आय को आफ्नो मुख्य स्रोत जाने गर्न सक्छन्, तपाईं यो घटना लगानी गर्न योजना छैन, विशेष गरी यदि हेर्नुपर्छ।
त्यसैले, तपाईं रमाइलोको लागि यो परियोजना मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, विरोधीहरूले संग प्रतिस्पर्धा, र यति मा, तर यो केवल मूड सेट छ। अधिकांश मानिसहरू अझै पनि किन्न भने "सीएस: जाओ" खेल लिन्छ ठाउँ ड्रप कुराहरू भन्ने तथ्यलाई थाह छ। यो खेल को पाठ्यक्रम तपाईं के तपाईं चाहनुहुन्छ भने या त प्रक्रिया मा, प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अनियमित वस्तुहरू छोड कि गर्न सक्छन्, तर यदि तिनीहरूले "प्रोत्साहन" आफ्नो सूची देखा पर्नेछ (पाठ्यक्रम, हामी खेल को आधिकारिक संस्करण बारेमा कुरा गर्दै छन्, र अर्थ छैन जो वास्तवमा तपाईं पनि प्रत्यक्ष विरोधीको साथ छैन लड्न सक्नुहुन्छ देखि, बेकारी छ समुद्री बारेमा - र खेल को सम्पूर्ण बिन्दु हो)। र तपाईं प्ले अब, अधिक तपाईं कुराहरू ड्रप सुरु, र अधिक संभावना यो कुरा महंगा र राम्रो प्राप्त हुनेछ। त्यसैले तपाईं कसरी पैसा बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने: - वरिपरि यस लेखमा प्रस्ताव गरिने विधिहरू सबै लगभग Revolve हुनेछ त्यो ठूलो ऐसे लगानी बिना "सीएस GO", तपाईं सधैं सम्झनुपर्छ ड्रप छ।
धेरै लाग्छ सक्छ, पनि अलिकति परियोजना परिचित छ जो: - पहिलो, यो लेखमा छलफल रूपमा छैन कसरी मा खाल बनाउन छ "GO सीएस"। हो, छाला को शूटर अनुसार रुचाउनु भएका खेलाडीहरूलाई को व्यापार नीति धेरै महत्वपूर्ण भाग हो ड्रप, तर यो हालै शुरू गरिएको छ कि अपरेसन सुरु गर्न लायक छ। यसको सार के हो?
तपाईं सञ्चालन गर्न पहुँच दिन हुनेछ पैसा को एक निश्चित राशि तिर्नुपर्छ - तपाईं पारित गर्न सक्छ कार्यहरू एक सेट, र तिनीहरूलाई प्रत्येक तपाईं कम्तिमा एक ड्रप प्रत्याभूति गरिनेछ। तुलना लागि, सञ्चालनका एक थोपा बिना एक पटक प्ले केही घण्टामा हुन्छ, र एक उच्च स्तर, आफ्नो सीप छ, र टोली राम्रो चयन तपाईं एक घण्टा केही कुराहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। अपरेसन एक म्याद समाप्त हुने मिति, त्यसैले उनीहरूले बस थालेका छन् जब तिनीहरूलाई किन्न निश्चित गर्नुपर्छ र खेलाडीहरू को एक ठूलो संख्या पनि सञ्चालन गर्न समय छैन, जबकि, थप वस्तुहरू बेच्न समय छ सकेसम्म काम आयोजित, र बिक्री को लागि माथि राख्नु छैन वस्तुहरूको ठूलो संख्या। यो स्वाभाविक कम मूल्यहरु गर्न जान्छ। ": GO सीएस" तर यो तपाईं कसरी प्ले गरेर पैसा बनाउन संग थप विस्तार बुझ्नुपर्छ सबै विवरण बुझ्न राम्रो छ।
": GO सीएस" त्यसैले, तपाईं वास्तविक पैसा प्राप्त गर्दा उहाँको मनपर्ने कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं मा पैसा कहाँ इच्छुक हुनुपर्छ। सरल, तर सबै भन्दा लाभदायक विकल्प - यो भनेर गिर सुरु सामान्य बिक्री छ। तपाईं केवल आफ्नो प्रिय शूटर प्ले, र समय समयमा तपाईं वस्तुहरू तपाईं अन्य खेलाडीहरूलाई बेच ड्रप हुनेछ - यो जानाजानी गम्भीर परिणाम हासिल गर्न प्रयास गर्ने छैन हो।
यो यस खेल समर्पित अन्य वेबसाइटमा साथै एक व्यापारिक मंच "स्टीम" मा गरेको सकिँदैन, र, मा विशेष, यसको वित्तीय खण्ड। त्यसैले तपाईं पनि धेरै पैसा कमाउन छैन, तर तिनीहरूले नयाँ खेल किन्न समय समयमा पर्याप्त छ। तर तपाईं कसरी पैसा बनाउने तरिकाहरू देख रहे भने "सीएस: जाओ" ठूलो परिमाणमा, त्यसपछि तपाईं एक सानो लाग्छ र प्रयास छ।
तपाईं कसरी पैसा बनाउन सोचिरहेका छन् भने "सीएस: जाओ" लगानी बिना व्यापार - यो तपाईं को लागि एक आदर्श समाधान छ। यसको सार लड्नुभयो एक खेल समयमा, तपाईं बेचन छैन, र कुराहरू एक बिट थप तपाइँको भन्दा महंगा छन् कि ती लागि साटासाट छन् भनेर वास्तवमा निहित। यो विधि धैर्य र समय को एक ठूलो लगानी आवश्यक छ। हरेक खेलाडी खराब लागि राम्रो कुरा व्यापार गर्न चाहन्छ, तर परिणाम रूपमा आफ्नै कारण सहमत गर्ने कसैले त्यहाँ छ।
यसलाई रोक्न र लायक पाँच rubles, पचास लागि अर्को कुरा हो, जो एक कुरा को लागि नसोध्नुहोस् कहिले थाहा महत्त्वपूर्ण छ। इच्छित भने, तपाईंले एक राम्रो रकम कमाउन मदत गर्नेछ भन्ने व्यापार को एक ठूलो श्रृंखला निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यस मामला मा एक हात nabete भने, तपाईँले सजिलै प्रति दिन पचास rubles पचास सेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जो सफलता गर्न आवश्यक अर्को धेरै साधारण विधि, साथै, केही अवस्थामा छ, प्रमुख खेलाडीहरू र टोली ज्ञान। त्यहाँ जोखिम प्रेमीहरूलाई जहाँ विशेष साइटहरु छन्। आगामी खेल को घोषणा त्यहाँ प्रकाशित छन्, र तपाईं कि खेलमा भाग को टोली कुनै पनि कुनै पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले यो पूल गर्न इच्छुक मानिसहरूलाई दुई कुराहरू जा रहेको छ, र फलस्वरूप, आफ्नो टीम जित्छ भने, तपाईं पछाडि आफ्नो कुरा प्राप्त, साथै एक वा दुई (को कारक आधारमा) अर्को टोली धारण थिए कुराहरू रूपमा। आफ्नो टीम अनुपलब्ध भए, त्यसपछि आफ्नो वस्तु सही विकल्प जो कसैले जान्छ। यो धेरै जोखिमपूर्ण छ, तर यो सकेसम्म तपाईं एक लाभ रूपमा ठूलो ल्याउन सक्छ नै समय छ।
यो विधि गेमप्लेको गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित छैन, तर पनि केही लगानी आवश्यक छ। जब तिनीहरूले बिक्री छन् के तपाईं खेल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई धेरै बेच्न तीन वा चार पटक मा। विशेष गरी, "सीएस: जाओ" एक सुविधाजनक वस्तु, यो खेल आज संसारमा शीर्ष तीन लोकप्रिय छ जस्तो छ।
र अन्तमा - यो खेल मा हरेक दिन रचनात्मक मान्छे को लागि परिषद त्यहाँ नयाँ खेलाडीहरूलाई र नयाँ clans दर्जनौँ सयौं छन्। तिनीहरू सबै हतियार एक सुन्दर अवतार, उज्ज्वल र आँखा तेतैतिर कोट चाहनुहुन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई यो प्रदान गर्न सक्छन् भने, उनीहरूले तपाईँलाई भुक्तानी गर्नेछ।
Gamescom: स्वागत र 2013 मा लोभ्याउने नयाँ वस्तुहरू
फर्नीचर सजावट लागि "Maynkraft"
Minecraft: enchantment वस्तुहरू
Volvo VNL: विनिर्देशों, मालिकको समीक्षा, फोटो
मर्सिडीज बेंज एसएलआर मैकलन - गति, सुरक्षा र सुन्दरता को अधीन
भोज हल "नेपोलियन" - यसको सबै महिमा मा एक लक्जरी
शैक्षिक संस्थाहरू को प्रकार। "रूसी संघ मा शिक्षा मा" संघीय व्यवस्थाको लेख 23
बेलग्रेड मा Mamaev कुरगान। Mamayev हिल - इतिहास
जीनोटाइप र प्राकृतिक विज्ञान रूपमा phenotype, र सामाजिक विभाग
Ultop। प्रयोगको लागि निर्देशन
ओलम्पिक खेल 2014 को mascots - तिनीहरूले के हुन्?
टोलीमा लागि Slogans र आदर्श वाक्य। अभिवादन, मन्त्र, slogans, खेल टोलीका लागि मन्त्र
मिथेन मांसपेशी: यो आवश्यक छ?
हक्की खेलाडी इगोर Bobkov एस .: जीवनी, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य
मिखाइल Goryunov अभिनेता र आफ्नो क्यारियर